Manokana - Chongqing Fangtong Animal fanafody Co., Ltd
Ny orinasa mahery mihazona ny teknolojia manana hery sy ny olona manan-talenta maro ireo. 9 mpiasa manana asa ambony lohateny. Misy amin'izao fotoana izao mihoatra ny 300 ny fitambarany mpiara-miasa, eo aminy ny 30% ho mpitsabo biby, pharmacists. mpahay simia, teknisiana, ary ny injeniera amin'ny fanafody fototra.
Mpiasa tsirairay dia tsy maintsy mahazo ny 2 potoana taranja fiofanana isan-taona. Mazava ho azy tsirairay maka 5 andro, lohahevitra nandrakotra ny farany Post GMP fepetra takiana sy saina ny amin'ny tena.
Ny orinasa ihany koa ny fampiofanana sy ny Boky Base ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma ny Veterinary College ny Southwest University. Nanomboka tamin'ny 2000, ny orinasa dia manolotra vatsim-pianarana ireo mpianatra niavaka amin'ny oniversite Veterinary PF Southwest University. Isan-taona, dia misy mpianatra nahazo diplaoma tsara manatevin-daharana ny orinasa miasa.